sorgum sheller စက်ဘက်ပေါင်းစုံစပါးကို shell ကို millet ခွံ,ဂျုံ
မင်းစပါးစိုက်သည်, ဂျုံ, ပဲ, နှံစားပြောင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းဆန်? သို့မဟုတ်သင်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအစေ့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၌ရှိကြ၏? သင်ကသူတို့ကိုစပါးနယ်လှည့်ရန်စိုက်ပျိုးရေးစက်ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်, ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ multifunction grain sheller ကိုမရွေးသင့်သနည်း? ဒီလိုမျိုးအမျိုးစုံသောဘောနပ်စ်အခွံစက်မှကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးရရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ကတိပေးသည်.
စပါးခြွေလှေ့ရန်အတွက်များစွာအသုံးပြုနိုင်သောစပါးခြွေလှေ့စက်ကိုအသုံးပြုသည်, ပုလဲ millet, ငရုတ်သီးစိမ်း, ပဲပုပ်,ဆန်,ဂျုံနှင့် adzuki bean.Pearl millet သည်အာဖရိက၏အငတ်ဘေးအများဆုံးဒေသအချို့တွင်ကြီးထွားစေသောအာဟာရဓာတ်သီးနှံများဖြစ်သည်။, ခြောက်သွေ့အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအထွက်နှုန်းထုတ်လုပ်, မြေဆီလွှာအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့်အတူရာသီဥတုပူ. ပုလဲဆန်သည်ကျေးလက်နေဆင်းရဲသားများအတွက်အဓိကအာဟာရအရင်းအမြစ်ဖြစ်သော်လည်း, ဘက်ပေါင်းစုံသောဆန်စက်သေတ္တာစက်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်အလားအလာများကိုမတတ်နိုင်သောလုပ်သားအင်အားနည်းသောဓလေ့ထုံးတမ်းများဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်။ ဗစ်တိုအမှတ်တံဆိပ်ဘက်စုံသုံးစက်ဆန်စက်ကိုအသေးစားလယ်သမားများအနေဖြင့်ပုလဲဆန်စေ့များကိုအထွက်နှုန်းတိုးစေရန်ကူညီရန်တီထွင်ခဲ့သည်။. ဒီဇယ်အင်ဂျင်စက်မှော်စက်သုံးစက်ကိုသမဝါယမများကစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်သည်, တစ် ဦး ချင်းအိမ်ထောင်စု, ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားဖြင့်, အဘယ်သူသည်အဆင်ပြေမှာသူတို့ရဲ့စပါးကို process နှင့်ဒေသခံစားသုံးမှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်, ဒါမှမဟုတ်ဒေသခံစျေးကွက်မှာရောင်း.
ဤစပါးနှံစားပြောင်းစက်သည်အမျိုးမျိုးသောသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, အခြားခြွေလှေ့စက်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဆွဲယူပါ, ဒီဘက်ပေါင်းစုံစပါးကို sheller စက် Single- အဆင့်လျှပ်စစ်စစ်ဆင်ရေးချမှတ်,ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ ,ညှိနှိုင်းမှုကိုအသုံးပြုရန်အဆင်ပြေသည်တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်, ၎င်းသည်လုပ်အားကိုချွေတာရုံသာမကလုပ်သားအင်အားကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။ ဆုံးရှုံးမှုနှုန်းနည်းပြီးစပါးနှံများနည်းပါးသည်, သန့်ရှင်းမှုနှုန်း ။Sorghum sheller စက်သည်ကောက်ပဲသီးနှံအမျိုးမျိုး၏လိုအပ်ချက်များကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီးတောင်သူလယ်သမားများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအများစုအတွက်စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။.
1.ဘက်စုံသုံးဆန်ခြွေလှေ့စက်သည်ထိရောက်ပြီးဆန်နှင့်ဂျုံတို့ကိုတစ်မူထူးခြားစွာကြိတ်ခွဲနိုင်သည်. Millet Threher Machine တွင်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏အင်္ဂါရပ်များရှိသည်, လှပသောပုံသဏ္andာန်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေး. ၎င်း၏မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုနှုန်းအားဖြင့် featured, ကောင်းသောစပါးနယ်နိမိတ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စပါးအနည်းငယ်ဆုံးရှုံးမှုစသည်တို့, sorgum sheller စက်သည်လယ်သမားများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်သည်. အဆိုပါဘက်စုံသုံး sorghum sheller စက်ကျယ်ပြန့်လျှောက်လွှာအကွာအဝေးရှိပါတယ်, အဆင်ပြေခြင်းနှင့်လုံခြုံ, မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု, အနိမ့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှုန်းနှင့်အနိမ့်ဆုံးရှုံးမှုနှုန်း.
2.Multi-functional sorgum sheller စက်သည်အဓိကအားဖြင့်မော်တာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်,ထိန်သိမ်း, ခွက်မျက်နှာပြင်, စည်, အဖုံး, အဓိကပန်ကာ, ဒုတိယစုတ်ယူခြင်းပန်ကာ, တုန်ခါနေသောမျက်နှာပြင်, သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထား။ ဒီဇယ်ဆန်စက်ခြွေလှေ့စက်ကို 3kw Single-phase လျှပ်စစ်မော်တာဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်, ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်သို့မဟုတ်ဒီဇယ်အင်ဂျင် .
3.နှံနှံခြွေလှေ့ ဂဟေလှံတံကိုအံသွားနှင့်ခွက်ပန်းကန်အကြားကွာဟချက်ကိုအသုံးပြုပြီးစက်, စပါးအမြိုးအနှယျပြီးနောက်လှည့်အားဖြင့်ဖယ်ရှားသည်, ရပါတယ်, ဆုပ်ကိုင်, ရိုက်နှက်ခြင်း,အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ, ဘက်စုံသုံးဆန်ခြွေလှေ့စက်သည်စပါးနယ်ကိုရိတ်သိမ်းသည့်စည်သို့ကျွေးမွေးလိမ့်မည်. လေပူဖောင်းများနှင့်လေစုတ်ယူခြင်းနှင့်တုန်ခါနေသည့်ကောက်ရိုးကို အသုံးပြု၍ ပန်ကာ၏တုန်ခါမှုမျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုသည်. ကောက်ပဲသီးနှံနှင့်ကောက်ရိုးသည်တစ်ချိန်ကစပါးခွဲခြင်းနှင့်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းကိုပြီးစီးခဲ့သည်, နှင့်ဖယ်ရှားရေးနှုန်းကိုရောက်ရှိခဲ့သည် 99%.
ဘက်စုံသုံးသေနတ်ကိုင်စက်တွင်အစာကျွေးသောဟော့ပါရှိသည်, စည်, မျက်နှာပြင်နှင့် shelf.It စပါးနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်, ခွဲထုတ်, ကောက်ရိုးတစ်ခုလုံးအဖြစ်ခုတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ဂျုံများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, မုယောစပါး, ဆန်, ငရုတ်သီးစိမ်း, Millet, ၀ င်ပေါက်ဆီသို့ ဦး တည်သည့်အထူးဒီဇိုင်းသည်ကုန်ကြမ်းများကိုနေရာချရန်အဆင်ပြေစေသည်. ဖြည့်စွက်ကာ,သီးနှံများကိုရွေးချယ်ခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည် 80% အစိုဓာတ်,အရာကျိုးနှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါဘက်ပေါင်းစုံပစ်ခတ်မှုများစက်အလုပ်လုပ်သောအခါ, ကောက်ပဲသီးနှံများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အညီအမျှကျွေးမွေးသည်. သီးနှံကိုပွတ်တိုက်အားဖြင့်အညှာမှကွဲသွားသည်, ရက်စက်, စည်နှင့်စည်ပေါ် screen.after စည်အပေါ်ထိန်သိမ်းအကြားတိုက်မှုနှင့်လှုပ်, နှင့်အညှာပန်ကာပန်နေဖြင့်ထွက်လွဖြစ်ပါတယ်. ဤအတောအတွင်း,အဆန်သည်အခြားထွက်ပေါက်မှထွက်လာသည်.
လျှပ်စစ်မော်တာ / ဒီဇယ်အင်ဂျင်